पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र प्रवर्द्धन गरेका छौँ : अध्यक्ष पुन, अन्नपूर्ण - पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र प्रवर्द्धन गरेका छौँ : अध्यक्ष पुन, अन्नपूर्ण -
पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र प्रवर्द्धन गरेका छौँ : अध्यक्ष पुन, अन्नपूर्ण
उज्यालो प्रतिनिधि ५ चैत्र २०७७, बिहीबार अन्तर्वार्ता
म्याग्दी । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुन भारतीय गोरखा सैनिकबाट सेवानिवृत्त क्याप्टेनसमेत छन । पर्यटकीयस्थल घोडेपानीमा लामो समय होटल र पर्यटन व्यवसायको अनुभव सँगालेका पुनले आफूले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा पाएको सुविधालाई विपन्नको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक काममा परिचालन गरेका छन । सेनामा रहँदा पौडीमा अन्तरराष्ट्रिय पदकसमेत जितेका पुनसँग गाउँपालिकाका गतिविधि, समस्या, सम्भावना र चुनौतीका विषयमा केन्द्रित रहेर राससका म्याग्दी समाचारदाता सन्तोष गौतमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
राससः स्थानीय तहको करीब चार वर्ष नेतृत्व गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?
राससः पर्यटन क्षेत्रको विकासमा केकस्ता काम भएका छन् ?
पुनः विश्वप्रसिद्ध अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग र आठ हजार मिटरभन्दा अग्लो पहिलोपटक मानव पाइला परेको अन्नपूर्ण हिमाल हाम्रो भूगोलमा पर्छ । अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको आधार शिविर जोड्ने ‘मौरिज हर्गोज’ पदमार्ग पहिचान गरेर पर्यटन विभागबाट पूर्वाधार निर्माण शुरु भएको छ । ओझेलमा परेका पर्यटकीयस्थलको प्रचारप्रसार गर्न गत वर्ष प्रथम अन्नपूर्ण पर्यटन महोत्सव र अध्यक्ष कप खेलकूद प्रतियोगिता सञ्चालन गरेका थियौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले १०० पर्यटकीयस्थलमा सूचीकृत गरेको घोडेपानी, पुनहिल र मोहरेडाँडामा पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ । घोडेपानीबाट पुनहिल जोड्ने पदमार्गमा सोलार जोडिएको छ । पुनहिलमा दृश्यावलोकन केन्द्र बनाएका छाँै । पुनहिलबाट मोहरेडाँडा जोड्ने पदमार्ग निर्माण भएको छ । मोहरेडाँडाको सामुदायिक लजको क्षमता बढाएका छाँै । घोडेपानीबाट प्यारीबाराही ताल जोड्ने घोडा र साइकलबाट यात्रा गर्न सकिने पदमार्ग बनाउन लागेका छौँ । गण्डकी प्रदेशकै ठूलो घोडेपानी क्षेत्रमा पर्ने फूलबारीमा गुराँस उद्यान बनाउने तयारी भएको छ । खोपारा लेक जोड्ने पदमार्ग निर्माण, सामुदायिक लजको क्षमता विस्तार शुरु भएको छ । जलथले–फगाम र भुरुङबाट मुन्द्रा चडाउने डाँडा हुँदै धवलागिरि आइसफलसम्म जोड्ने पदमार्ग निर्माण भइरहेको छ । केही समय अगाडि मेरै नेतृत्वमा ट्रेकिङ एशोसिएशन (टान)को टोली अन्नपूर्ण नर्थ बेसक्याम्प पुगेर आएका थियौँ । अत्यन्तै सुन्दर त्यस स्थानसम्म आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई पु¥याउनका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ । त्यो सफल हुनु गाउँपालिकाका लागि निकै ठूलो उपलब्धि हो ।
राससः अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था कस्तो छ ?
राससः तपाईँले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा पाएको सुविधालाई सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुभएको छ । कसरी र किन गर्नुभएको हो ?
राससः तपाईँ भारतीय सेनामा रहँदा विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय पदक पनि जित्नुभएको रहेछ ? पालिकाले खेल क्षेत्रको विकासका लागि के गरेको छ ?